युगसम्बाद साप्ताहिक - दुई सय वर्षअघिको त्यो सन्धि
Monday, 02.17.2020, 08:45pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 03.09.2016, 11:28am (GMT+5.5)
पृथ्वीनारायण शाहले टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको नेपाल राष्ट्रलाई एकीकरणको थालनी गरे । उनको निधनपछि पनि यो क्रम चलिरह्यो र नेपालको भूमि फैलियो । यो क्रम सुगौली सन्धि नहुँदाका अवस्थासम्म कायम भयो । नेपाल अंग्रेजसंग युद्धमा पराजित भएपछि नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउनु प¥यो– सुगौली सन्धिको नाममा । नेपाली भूमिमाथि यहीबाट अतिक्रमण सुरू भयो । सुगौली सन्धिले झण्डै अहिलेको आधा नेपाल गुम्न पुग्यो । मार्च ४ मा भएको त्यो सन्धि शुक्रबार दुई वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा नेपाल र भारतबीच भएका अनेक सन्धि र सम्झौताहरूको प्रश्न उठिरहेका बेला सन् १९५० को सन्धिको धारा टेकेर नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग पाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालिएको छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले “हामी जसरी भारत आएका थियौं त्यसै गरी जाँदैछौं” भन्दै तमाम सन्धि तथा सम्झौताहरू अमान्य हुने बताएको थियो । त्यस्तै सन् १९५० मा नेपाल र भारतीबीच भएको ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को प्रावधान बमोजिम पनि सुगौली सन्धि स्वतः खारेज भएको छ । तर, यो व्यवहारमा लागू छैन ।
नेपालले भारतका कारण भोगिरहेका अनगिन्ती समस्याहरूमध्ये राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित मुद्दाले सवै नेपालीको मन मस्तिष्क घोचिरहेको छ । सुगौली सन्धिका कारण गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता पाउनुपर्ने दावी राष्ट्रवादी आन्दोलनका अगुवाहरूले गर्दैछन् । भारतलाई थाहा भएको कुरा के हो भने सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धि समाप्त वा रद्द भएको मनिन्छ । नेपालमो दह्रो र राष्ट्रवादी सरकार गठन भयो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुग्नसक्छ र त्यस्तो अवस्थामा भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुुपर्ने हुन्छ । यसैले त भारत १९५० को सन्धि पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्ने विषयलाई महत्व दिन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको कुरा गरेर निकै ठूलो बाजी मारेको भ्रम छर्छन् । यथार्थमा सो सन्धिका सम्पूर्ण धाराहरूको कार्यान्वयनमाा नेपालले आवाज उठाउनुपर्ने हो । किनभने यो सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन भनेको ‘ग्रेटर नेपाल’को पूर्णता हो ।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि हुँदा भारतमा ‘ब्रिटिस–इण्डिया कम्पनी’ ले राज गरिरहेको थियो । नेपालले गरेको उक्त सन्धि भारतसित नभएर बेलायतसित हो । तैपनि नेपालका शासकहरूले यस विषयमा भारतसंग चुँइक्कसम्म गर्न सकेका छैनन् । नेपालभित्र मात्र होइन यस विषयमा भारतभित्रै (जहाँ नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता छ) ‘ग्रेटर नेपाल’को आन्दोलन चलिरहेको छ ।
सुगौली सन्धिका कारण नेपालको एक तिहाई भूभाग भारतमा गाभिएको छ । पुरानो नेपालको नक्सा अनुसार नेपालको सीमाना भूटान र बंगलादेशसंग जोडिएको छ । नेपाली पक्षले यस विषयमा भारतसंग कुनै कुरा राखेको छैन । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने पा परिमार्जन गर्न भारत तयार भएको समाचारहरू प्रकाशमा आइरहेको बेला यसै सन्धिको प्रावधान टेकेर सुगौली सन्धिका विषयहरू पनि उठाइनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्नासाथ स्वतः सुगौली सन्धिको प्रसंग आउने निश्चित छ । यसका यसका अतिरिक्त १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेपछि भारतकै कारण नेपालले हालसम्म ६६ हजार हेक्टर भूमि गुमाउनु परेको छ । भारतले नेपालको २४ जिल्लाको ६१ स्थानमा सीमा मिचेको छ । भारतले पश्चिमको कालापानीमा एकै स्थानमा ३७ हजार हेक्टर भूमि मिचेको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार हेक्टर भूमि हडपेको छ ।
सन् १९५० को सन्धिलाई दुवै देशको राजनीतिक तहले जति बढी महत्व दिए पनि नेपालले गुमाइरहेको आफ्नो भूमिका विषयमा भने चासो देखाइएको छैन । बरू वदलामा सुस्ता र कालापानी बाहेक बाँकी स्थानमा सीमा विवाद समाधान भएको भन्दै नयाँ नक्सा तयार गर्ने काम भयो । १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल कसरी ठगिएको छ ? नेपाल कुन क्षेत्रमा बढी पीडित छ ? भन्ने प्रश्नहरू अहिले मुलुकको राजनीतिक–बौद्धिक क्षेत्रले निकै चासो दिइरहेको विषय हो । विशेष गरेर नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपको चर्चा अत्यधिक हुने गरेको सन्दर्भमा भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल दशौं स्थानभित्र पर्दछ । भारतले नेपाललाई जति अनुदान वा सहयोग दिन्छ त्योभन्दा धेरै नेपालबाट लैजान्छ । नेपाली युवाहरू रोजगारी नपाएर खाडीमा पसिना चुहाइरहेका बेला र नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सबाट धानिएरहेका बेला नेपाल भने भारतको रेमिट्यान्सको बार बनिरहेको छ । नेपालमा घरेलु कामदेखि कृषि, औद्योगिक मजदुर, निर्माण मजदुर लगायत सानोतिनो व्यापार व्यवसाय लगायत ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसम्म भारतीयहरूको संलग्नता रहेको छ । यसै भएर नेपाल भारतको आर्थिक स्रोतको प्रमुख मुलुकको रूपमा स्थापित भएको हो । विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उपस्थित हुँदै गएको भारतको रेमिट्यान्स भित्रिने प्रमुख १० राष्ट्रहरूको सूचमा नेपाल रहनुको कम चिन्ताको विषय हैन ।